सानुबाबु, मेरो छोरो र प्रेमराजा महत – Janamanch.com
‘छोराछोरी सधैँ सँगै बसून् ।’ हरेक बाबुआमाले यस्तै चाहना राखेका हुन्छन् । तर, हाम्रो परिवार–संरचना नै भूमण्डलीकरणले भुटिसकेको अवस्थामा अब बा–आमाले यस्तो चाहना राख्नु स्वाभाविक ठहर्दैन। फेरि, छोराछोरीले कस्ता सपना बुनेका हुन्छन्, उनीहरूको सपनाको पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ । अभिभावकले हस्तक्षेप गरिदिनु भनेको उनीहरूको चित्त दुखाउनु हो । पखेटा हालेर उड्न तयार भएका बचेरालाई रोक्नु हुँदैन । उडून्, उड्न दिनुपर्छ । घुमून्, घुम्न दिनुपर्छ । जाऊन्, जान दिनुपर्छ।
फेरि भन्नुभयो, ‘राम्रोसँग पढ्नू । एसएलसीमा फस्र्ट डिभिजन ल्याउनू ।’ मैले आज्ञाकारी शिष्यले झैँ भनेको थिएँ, ‘हस् हजुर ।’ यसरी नै सानुबाबुलाई मैले सयौँचोटि ‘हस् हजुर’ भनेको थिएँ । त्योबेला एसएलसीमा साइन्स कम्पलसरी थिएन । ऐच्छिक विषयमा सानुबाबुकै मर्जीबमोजिम अतिरिक्त गणित र विज्ञान लिने भएँ।
कति कमजोर तर्क थियो प्रेमराजाको । नयाँ गीत रिलिज गर्न नेपालै आउनुपर्ने, तर छोराछोरीको भविष्य बनाउन विदेश जानुपर्ने ! श्रोता नेपाली चाहिने, देश नेपाल नचाहिने ! सम्पत्ति र सुख कति भयो भने मानिसलाई पुग्छ हँ ?’ प्रेमराजाको जिकिर पढेर रन्थनिएको दिमाग सानुबाबुको स्वदेश परित्याग सम्झेर शान्त भएको थियो । अहिले आफ्नै छोरा विदेश उडेपछि ‘प्रेमराजाहरू’ किन देश छाड्छन्, जान्न थालेको छु । नागरिक
शनिबार, चैत्र १७, २०७४ मा प्रकाशित